Badeecadaha lagu beero beeraha ee gobolka Astrakhan badanaa lama kulmaan shuruudaha silsilada tafaariiqda. Tani waxay ahayd xilli ay si toos ah u baahinaysay barta bulshada ee Instagram Wasiirka Wasiirka Beeraha iyo Kalluumeysiga ee gobolka Ruslan Pashayev.
Isla waqtigaas, sida laga soo xigtay Pashayev, wasaaraddu waxay isku dayeysaa inay si firfircoon uga qaybqaato wada xiriirka ka dhexeeya tukaamada silsiladaha iyo soosaarayaasha beeraha maxalliga ah. “Waxaan ku celceliyay codsi ah in beeralleyda ka codsadaan X5 [X5 Retail Group], Magnit, iyo Xarfaha Dhadhaminta. Isgaarsiin ayaa jirta, ”madaxa wasaarada beeraha ee gobolka ayaa xaqiijiyay.
Xaqiiqada ah in soosaarayaasha beeraha ee Astrakhan aysan awoodin inay helaan luqad caadi ah oo leh silsilado tafaariiqda ah ayaa muddo dheer caan ah. Dhibaatooyinka noocan oo kale ah waa astaan ​​kaliya maahan gobolka Astrakhan, laakiin sidoo kale inta badan gobollada kale ee Ruushka. Sida khubaradu sheegeen, waxsoosaarka soo saareyaasha maxalliga ah ma la kulmaan shuruudaha adag ee ay horay u sii siiyeen kuwa tafaariiqda iibiyaasha alaabooyinka, taasina waa sababta kaliya ee soo saareyaasha waaweyn ee federaalka ama alaab-qeybiyeyaashu ay markasta guuleystaan.
Tusaale ahaan, khudaarta ka timaada gobolka Astrakhan, inta badan, waxaa loo diraa xarumo kala duwan oo loo qaybiyo oo ka baxsan gobolka halkaas oo ay kuxiran yihiin oo ay ku calaamadaysan yihiin, taas ka dib alaabtu waxay ku dhici doontaa khaanadaha silsiladaha tafaariiqda oo xadidan la taaban karo.
Beeraleyda Astrakhan ayaa mararka qaar uga cawda hogaaminta gobolka in ay iibiyaan wax soo saarkooda xitaa khasaare. Marka, xilliga qaboobaha, baarayaasha waxay ka caban jireen in bakhaarradooda ay u buuxsameen awood ay la leeyihiin baradhada maxalliga ah - qofna ma dooneynin inuu iibsado alaabada. Dhamaadkii sanadkii hore, gudoomiye Igor Babushkin wuxuu sidoo kale ogaadey dhibaatooyinka beeraleyda, oo sidoo kale ka cawday dhexdhexaadiyaasha iibsashada alaabada maxaliga ah wax aan jirin.
Si loo dhiso shaqo tayo leh alaabada tafaariiqda ah, soosaarayaasha beeraha waxay u baahan yihiin wax walba: xarumo qeybinta jumladaha casriga ah, baakadaha iyo astaamaynta qalabka, abaabulka aasaaska, saadka iyo xitaa ilaha suuq geynta. Iyo, dabcan, iskaashi, kaas oo aad muhiim ugu ah hawlgallada habsami leh.
Source: . Maanta
Tags: Gobolka Astrakhanshuruudaha silsilada tafaariiqdaalaabada beeraha
Dadka kunool gobolka Astrakhan ayaa horay u guran jiray 119 kun oo tan oo baradho ah
4 bilyan rubles ayaa lagu maalgelin doonaa mashruuc baradho ah oo laga sameeyay gobolka Astrakhan